बढी ‘ट्याक्स क्रेडिट’ लोभमा आय विवरण ढाँटे जीवनभर फसिन्छ - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-०९-२९ बिचार / प्रतिक्रिया
आउदो जनबरी २८ बाट अमेरिकामा गत आर्थिक वर्षको कर तिर्ने सिजन सुरु हुँदै छ । तर, केन्द्रीय सरकार ‘सट डाउन’ भएको कारण इन्टरनल रेभेन्यु सर्भिस (आईआरएस)ले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्दा सिजन सुरु हुने मिति केही लम्बिने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुबै दल राजनीतिक मुद्दाको बन्धक ‘‘ट्रेजरी’’लाई नबनाउन सहमत रहेका कारण सरकारका सम्पूर्ण अंग सुचारु नभए पनि आईआरएस चाँडै खुल्ने संकेत पनि देखिएका छन् । अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति पाएका सबैले वार्षिक रुपमा आयकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परिवारको संख्या र आयको अवस्थापश्चात् सरकारले कम आम्दानी भएकालाई कर फिर्ता पनि दिने गरेको छ । यसरी ‘ट्याक्स क्रेडिट’को लोभमा आम्दानी कम देखाएर पछि समस्या झेल्नेहरुको संख्या पनि बढी रहेको छ । यिनै सन्दर्भमा विश्वसन्देशले करविज्ञ सीपीए विराज रिजालसँग गरेको कुराकानी—
कर तिर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषय के के हुन् ?
कर तिर्न जानुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला चाहिँ डकुमेन्टमा नै ध्यान दिनुपर्छ । आफूले करमा जुन विवरण बुझाइन्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने डकुमेन्ट साथमा हुनै पर्छ । त्यसपछि कोही कर कारोबारका लाइसेन्सप्र्राप्त जानकार वा एकाउन्टेन्टकहाँ गएर आफ्ना कागजात देखाई आवश्यक सरसल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । आवश्यक डकुमेन्टअन्तर्गत वर्षभरिको आयव्ययको विवरण त भई नै हाल्यो, त्यसबाहेक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण, सोसियल सेक्युरिटी एवम् त्यो नहुनेलाई कर आईडी, काम गर्ने अनुमतिपत्र लगायत दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यबाट अधिकतम सेवा सुविधा लिन पाउँ र कर न्यूनतम तिर्नु परोस् भन्ने त मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो स्वभावका कारण करको रकम कम बनाउन आय लुकाउने या कुनै कागजात नदेखाउँदा आइपर्ने सक्ने जोखिम कस्तो हुन्छ ?
कर न्यूनतम नै तिर्ने हो । त्यो करदाताको अधिकार नै हो । तर, त्यो कानुनसम्मत भने हुनुपर्छ । कुनै डकुमेन्ट नै लुकाएर एकैचोटी ह्वात्तै कर बचाउँ या बढी छुट पाउँ भन्ने सोचले काम गर्नु हुँदैन । त्यसो गरेर एक पटक कर बुझाएको छ भने त्यो जहिले पनि छानबिनमा पर्न सक्छ । तत्काललाई केही रकम कर छल्दा बचत गरेँ भन्ने लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा त्यो जानाजान अनावश्यक दायित्व सिर्जना गरेको हो । र, त्यो दायित्व सानोतिनो पनि होइन । भोलि ब्याज, जरिवानासहित कयौं गुणा बढी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यति मात्र होइन ‘फ्रड’मा गयो भने त्यो ‘क्रिमिनल’ केसमा दर्ज भएर जीवन नै बर्बाद पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले कर छल्नु त गैरकानुनी नै भइहाल्यो । कर न्यून तिर्न प्लानिङ गर्ने अधिकार भने कानुनले नै दिएको छ । त्यसका लागि बेलाबेला आफ्नो कर सल्लाहकारलाई आर्थिक कारोबारको अवस्था दर्साएर न्यून गर्ने उपाय सोध्न सकिन्छ । जस्तो कुनै कारोबार यो वर्ष नगरेर अर्काे वर्षमा सार्ने उपाय हुन सक्ला या त्यसलाई ‘ट्याक्स डिफर्ट’ गरेर केही पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि ! यस्ता विषयमा चाहिं विज्ञसँग सरसल्लाह गरेपछि मात्र निचोड पुग्दा राम्रो हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिले आम्दानी लुकाएर कर छल्यो भने कहिले त्यसमा छानबिन हुन सक्छ या कहिले सजाय भोग्नुपर्छ ?
यो त ‘फर्जुलेन्स’ केस भन्ने हुन्छ एउटा, जसमा २५ प्र्रतिशत कम आय देखाएको या २५ प्रतिशत बढी खर्च देखाइएको हुन्छ । त्यो केस जीवनभरमा जहिले पनि खुल्न सक्छ । कसैले सुइँको दियो भने त्यो व्यक्तिलाई आईआरएसले उसको नाम गोप्य राखेर इनामसमेत दिन्छ । त्यति मात्र होइन कसैले अस्वाभाविक कर बुझाएको छ भने आईआरएसको कम्प्युटरले नै अलर्टसमेत गर्छ । सानातिना सिम म्याचको केसमा भने करदाताले छुटेको थाहा हुनेबित्तिकै सच्याउन पनि सकिन्छ । तर, नियत नै राखेर छलिएको करमा भने कहिल्यै उन्मुक्ति पाइएला भन्ने नसोच्दा हुन्छ ।
कम शुल्कमै कर तिरिदिने एवम् बढी क्रेडिट पनि दिलाउने लोभ देखाएर करदातालाई आकर्षित गर्ने र अन्तिममा करदाता फस्ने सम्भावना पनि छ नि ?
त्यो हुनसक्छ । धेरैचाहिं यस्तो क्रियाकलाप लाइसेन्स नलिई करको काम गर्ने व्यक्तिहरुले गरिदिन सक्छन् । लाइसेन्स लिएका व्यक्ति भने भोलि करदाता पक्राउ पर्दा आफू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएका कारण यसो गर्न हिच्किचाउँछन् । किनभने यस्तो केस सतहमा आए उनीहरुले वर्षौं दुःख गरेर लिएको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले बर्षेनी आचारसंहिता अन्तर्गतका विभिन्न तालिम एवम् कक्षाहरु लिइरहनु पर्छ । अब कोही व्यक्तिले करदातालाई यस्तो लोभ देखायो भने सम्बन्धित करदाताले ऊसँग सहमत हुनुअघि कम्तीमा अर्को एकजना व्यक्तिकहाँ गएर सुझाव लिएर मात्र कर बुझाउनु राम्रो हुन्छ । कोही चिनजानको छ, उसले सस्तोमा गरिदिन्छ या धेरै रिफण्ड आउने भयो भनेर बिल्कुलै लोभिनु हुँदैन ।
बैंक खातामा रोजगारीबाट प्राप्त मात्र नभई कसैले सापटी दिएको या उपहार दिएको रकम छ भने त्यो जानकारी आईआरएसलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
उपहारको छुट्टै प्रक्रिया छ । उपहार दिने व्यक्तिले कर तिर्ने हो । त्यसरी उपहार दिँदा चेकमै गिफ्ट भनेर खुलाएको एवम् एउटा प्रमाणपत्र पनि दिने हो भने सजिलो हुन्छ । त्यसो भएमा उपहार लिनेले विवरण बुझाइराख्नु पर्दैन । कुनै दिन प्रश्न आयो भने जवाफ दिन सजिलो हुन्छ ।
अर्कोचाहिं नेपाली समुदायमा धेरै व्यक्तिहरु गाडी चलाउने र १०९९ बाट कारोबार गर्ने चलन छ । अहिले त्यसमा दुई÷तीन वर्षअगाडिको विवरणबारे आईआरएसले चिठी पठाएर ठूलो मात्रामा जरिवाना तिर्नुपरेको सुनिन थालेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
यो समस्या ट्याक्सी या अरु कुनै आफ्नै नाममा काम गरेका ‘सोल प्रोप्राइटर’ बिजनेसहरुमा देखिएको छ । उहाँहरुले पनि अरु व्यवसायसरह वर्षभरिको आम्दानी र खर्चको विवरण राखेर ‘प्रोफिट एण्ड लस स्टेटमेन्ट’ बनाएर कर भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर, ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने सबै साथीहरुले वर्षभरिको विवरण बुक किपिङ गरेर राख्ने चलन त्यति छैन । अनि उहाँहरु आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोही कर कारोबार गर्ने व्यक्तिकहाँ गएर १०९९ अनुसार मेरो यति आम्दानी भयो यसबाट यतिको कर तिरिदेऊ भनेर कुनै न्यून रकम दिनुहुन्छ । जस्तो एक लाख आम्दानी देखिन्छ भने २० हजारलाई नाफा देखाएर कर तिरिदिन भन्नुहुन्छ । त्यसपछि त्यो कारोबार गरिदिने व्यक्तिले अन्दाधुन्द खर्चको शीर्षकमा रकम हालिदिन्छ । त्यसरी अन्दाजको भरमा राखिएको रकम त पछि कुनै पनि हालतमा म्याच हुँदैन ।
त्यसैले सुरुमै बरु आधा एक घण्टा बढी समय लागोस् तर हचुवाको भरमा चाहिं विवरण भर्नु हुँदैन । कर तिर्ने सिजनमा कारोबारीहरु पनि व्यस्त हुन्छन्, त्यसैले यस्ता ग्राहक भेट्दा उनीहरु खुसी हुन सक्छन् तर करदाता आफैँ सचेत भएर आफ्नो आयव्ययको विवरणमा ध्यान दिनुपर्छ । आफूसँग भएको विवरणभन्दा बाहेकको खर्च देखाउनेबित्तिकै कुनै न कुनै समस्या पर्छ भनेर त माथि नै छलफल भइसक्यो । यसप्रति सदैव सचेत हुनुपर्छ ।